सोमबार बाट काठमाडौं उपत्यकामा सबै खालका सवारी साधन चल्ने! लामो दुरीको यातायात चल्ने बारे यस्तो छ निर्णय - Nepali in Australia
July 1, 2021 July 1, 2021 autherLeaveaComment on सोमबार बाट काठमाडौं उपत्यकामा सबै खालका सवारी साधन चल्ने! लामो दुरीको यातायात चल्ने बारे यस्तो छ निर्णय
काठमाडौ । यातायाता व्यावसायीहरुले सोमवारवाट आफै निर्णय गरेर सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने भएका छन् । प्रशासनलाई सोमबार बाट सबै खालका गाडि चलाउने जानकारी यातायात ब्यवसायीले दिएका छन् ।
उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ सिट क्षमता भन्दा माथिका सवारी साधन मात्र चलाउने अनुमति दिएपछि ब्यवसायीहरु सो निर्णय विरु`द्ध उत्रिएका हुन् ।व्यावसायीहरुले बिहीबार काठमाडौं का तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लाई भेटेर प्रशासनको निर्देशन नमान्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आफुहरुको माग सुनुवाई नभए सोमवारवाट आफै गाडी चलाउने चेतावनी दिएका छन् । छलफलका क्रममा उनीहरुले आइतबार सम्म पर्खने र कुनै सुनुवाई नभए निर्देशन अवज्ञा गरेरै भएपनि सबै खालका गाडी चलाउने उनीहरुले बताएका हुन् । जोर बिजोर पद्धतिलाई वास्ता नगरी महामारीको अवस्था हेरेर सोमबार बाट सबै सवारी संचालन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यसअघि उनीहरुले शुक्रबार बाटै लामो तथा छोटो सबै खालका सवारी संचालन गर्ने बताएका थिए । तर सोमवार सम्मका लागि सो निर्णय पनि थाँती राखेका छन् । तर आजको छलफलमा भने तीनै जिल्लाका सिडीओहरुले ३ दिन समय प`र्खन अ`रोध गरेकोले पर्खने र सोमबार बाट सावारी संचालन गर्ने नेपाल यातायात मज`दुर संघले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधन भोलि देखि खुल्ने जारि गर्यो यस्तो नियम